Nov 20, 2017 by Amrit
हामीले दिनहुँ जस्तो गुगल फेसबुक जस्ता वेबसाईटहरु चलाईरहेका हुन्छौ। गुगल फेसबुक जस्ता अन्तराष्ट्रिय वेबसाईट बाहेकै ईकान्तिपुर, अनलाईनखबर जस्ता नेपाली वेबसाईटहरु पनि प्रशस्तै चलाईन्छ पनि। तर के तपाईले सोच्नुभएको छ, तपाईको पनि आफ्नै वेबसाईट बनाउन भनेर?
विश्व जगतमा प्रबिधिले एक पछि एक छलाङ्ग मार्दै जादा हामी प्रत्यक्ष दर्शकको सिटबाट उठेर त्यही प्रबिधिको बिकासक्रममा पछ्याउदा अल्लि पछाडीनै परेका छौँ। हामीले मनमा उठेका कुराहरु बिश्वजगत सामु प्रश्तुत गर्न अनेक माध्यम हरु प्रयोग गर्छौँ । सबै भन्दा बढि प्रयोग हुने भएर पनि प्राय जस्तो फेसबुक ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुमा राखेर आफ्ना कुराहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गर्छौ। तर मनमा आफ्ना भावहरुलाई आफ्नै डिजाइनमा मिलाएर प्रस्तुत गर्न भने फेसबुकबाट असम्भब नै हुन्छ पनि। आफुले जानेका कुरा आफुलाई भन्न मन लागेका कुराहरु दुनियाँसामु प्रस्तुत गर्नको लागी वेबसाईट एउटा राम्रो रङ्गमञ्च बन्न सक्छ।
वेबसाईट बनाउन साह्रै अप्ठ्यारो कुरा पनि हैन। ईन्टर्नेट ब्राउजरको सहायताले हेर्न मिल्ने जानकारी भएको पृष्ठलाई वेबपेज भनिन्छ। त्यस्तै वेबसाईट भनेको सम्बन्धित वेबपेजहरुको समुह हो जुन एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन। वेबसाईटहरु कुनै कम्प्युटर सर्भरको सहायताले सबैलाई हेर्न मिल्ने बनाईन्छ। हामीले आफ्नो मोबाईल, कम्प्युटरमा कुनै वेबसाईटको ठेगाना हानेपछि सो ठेगाना अनुरुप एउटा निश्चित वेबसर्भरले जानकारीलाई पेश गर्दछ। यसर्थ पनि वेबसाईट बनाउनको लागी सबैभन्दा पहिले कुनै एउटा वेबसर्भर छान्नु पर्छ। वेबसर्भर निशुल्क र शशुल्क दुबै प्रकारका हुन्छन। निशुल्क वेबसर्भरमा केही सिमा भने हुन्छ। त्यस्तै ठुलै वेबसाईट बनाउने लक्ष्य छ भने कुनै वेबसर्भर किन्दा नै भरपर्दो हुन्छ भने व्यक्तिगत प्रयोगको लागी निशुल्क वेबसर्भर पनि काफी हुन्छ। निशुल्क वेबसर्भरहरु गुगलमा "Free web hosting" भनेर खोज्ने भने प्रशश्त रुपमा पाईन्छ। तिनिहरु मध्य "000webhost", "awardspace" जस्ता केही वेबसाईट अग्रपङ्क्तिमा छन। कुनै एउटा वेब होस्टिङ्ग छानेर त्यसको वेबसाईट भित्र गएपछि त्यसका सुबिधा हरु सँगै “Sign Up” वा “Create an account” लेखेको कुनै लिङ्क भेट्न सकिन्छ । त्यसभित्र गएर त्यहि सोधे अनुरुप आफ्नो खाता खोलेपछि अन्तत नेमसर्भरको जानकारी भेट्न सकिन्छ।
वेबसाईट बनाउन आफ्नो छुट्टै वेब ठेगाना लिन सक्नु पर्छ। हामीले फेसबुक खोल्न जसरी facebook.com हानिन्छ, त्यस्तै आफ्नो पनि वेब ठेगाना लिन डोमेन दर्ता गर्न पर्दछ। वेब ठेगाना आफ्नै छुट्टै हुन पर्छ। .com डोमेन लिनको लागी अलिकती खर्च गर्नुपर्दछ। क्रेडिट कार्डको सहायताले godaddy लगायतका वेबसाईटबाट आफुलाई चाहिएको वेबसाईट दर्ता गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा नेपाल सरकार द्वारा व्यक्तिगत र कुनै अफिसको लागी निशुल्क एउटा डोमेन दर्ता गर्ने सुबिधा प्रदान गरिएको छ। यसको लागी तपाईँ सँग नागरिकता हुनु आवश्यक छ।
कुनै संस्थाको लागी वेबसाईट दर्ता गर्नको लागी सो संस्था दर्ता गरिएको हुन पर्दछ।
वेबसाईट दर्ता गर्न आफ्नो संस्थाको लेटर प्याडमा वेबसाईट बनाईपाउँ भनि एउटा निवेदन लेखेर फोटो खिच्नु पर्दछ। त्यस्तै आफ्नो संस्थाको दर्ताको पत्रको पनि फोटो खिच्नु पर्दछ।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिगत वेबसाईटको लागी आफ्नो नागरिकताको फोटो नै काफी हुन्छ। वेबसाईट दर्ता गर्ने सुबिधा मर्कन्टाईलले प्रदान गरिरहेको छ। मर्कन्टाईलको अनुसार सुचारु र निष्कृय दुबै गरेर लगभग ८३००० वटा .com.np डोमेन दर्ता भईसकेको छ। यसर्थ पनि आफुले चाहेको डोमेन पाउन छिटै नै दर्ता गर्नु पर्दछ।
दर्ता गर्नको लागी http://register.mos.com.np मा गएर फारम भर्नु पर्दछ। आफुले चाहेको डोेमेन नाम , आफ्नो नाम, ठेगाना, मोबाईल नं लगायतका जानकारी भर्नु पर्दछ। त्यस्तै अगाडि उल्लेखित कागजातको फोटो पनि त्यहि अप्लोड गर्नु पर्दछ। त्यस्तै पहिले टिपिएको नेमसर्भर पनि भर्नु पर्दछ। त्यहा फारम भरेको केही दिन भित्र हजुरको वेबसाईट दर्ता हुन्छ। दर्ता भएपछि अब भने आफुले पहिले छानेको वेब होस्टिङ्गको वेबसाईटमा गएर लग ईन गर्नुहोस। तपाईले छानेको वेबहोस्टिङ्ग अनुसार wordpress स्थापित गर्ने ठाउँ बेग्लै बेग्लै हुन्छ। सोहि अनुरुप बिभिन्न ठाउँमा गएर एकचोटी wordpress स्थापित गरिसकेपछि आफुले चाहे अनुरुप बिभिन्न लेख, आलेख, लगायत आआफ्नो ईच्छा अनुरुप लेख्न सकिन्छ।
हामीले दिनहुँ जस्तो गुगल फेसबुक जस्ता वेबसाईटहरु चलाईरहेका हुन्छौ। गुगल फेसबुक जस्ता अन्तराष्ट्रिय व...
हामी आफूलाई जानकारी चाहिएका थुप्रै विषय गुगल सर्च गर्दा सुरुमै विकिपिडियाको लिंक भेट्छौँ । व्यवस्थित...
लाखौँ अाए, ऊनको एक झलक हेरेर गए। तर पनि ऊनले कहिल्यै हातलाई निधारमाथी लगेर उनीहरुको अागमनमा उत्सुकता...
शुरु कताबाट गरुँ, मेसै पाइनँ र पनि शुरु गरे। कुनै दिन गुरुले एउटा कविता लेख्न भन्नुभयो। घरमा आएर धमा...
""ओई रमेश तलाई उठ्न पर्दैन?" बिहानै ममी ले बोलाउनु भयो। कती राम्रो सपना देखिरा'थे, झन अहिल्यै उठाइदि...